Raharaha Ratefinarivo: niakatra fitsarana, tsy nahazo LP ilay mpamily fiara | NewsMada
Raharaha Ratefinarivo: niakatra fitsarana, tsy nahazo LP ilay mpamily fiara
Niakatra fitsarana, omaly ny raharaha nahafaty an’Itompokolahy Ratefinarivo Vonjy, mpiasan’ny Niag. Izy ilay nitondra moto hamonjy fodiana, kanjo nofaohin’ny fiara 4×4 iray teny Andoharanofotsy, ny asabotsy 4 aogositra lasa teo. Amin’ny 11 septambra ho avy izao ny didim-pitsarana mahakasika ity raharaha ity.
Ilay mpamily fiara izay notanana vonjimaika eny Antanimora, ka nangataka fahafahana vonjimaika, saingy tsy nahazo. Somary nitaraina ny fianakavian’ny maty, satria nisy karazana ramatahora nahazo azy ireo talohan’ny fitsarana omaly, ary nandritra izany koa. “Ankinina amin’ny fahendren’ny fitsarana ny raharaha”, hoy ny fanazavana.
Raha tsiahivina, handeha hody ity mpiasan’ny Niag nitondra moto ity no voafaokan’ny fiara. Maty tsy tra-drano, ary potika mihitsy ny moto. Voalazan’ny fianakaviany fa mamo ilay nitondra fiara io, ary saika hitsoaka fa tsy tafahetsika ny fiara. Tamin’izany koa anefa no nisy jiolahy nanararaotra naka ny entan’ity niharan-doza. Nametraka fitoriana ny fianakaviana, satria nifamahofaho ny raharaha, ary izao mbola miandry ny valim-pitsarana izao.